ट्यागराज "हार्डी": मालिकको प्रतिक्रिया
रूसमा, मोटरमोबाइल उद्योग ठूलो मात्रामा विकास हुँदैछ। केहि वर्ष पहिले घरेलू उत्पाद सूची को एक नयाँ निर्माता - TagAZ संग पुनःस्थापित गरियो। यो बिरुवाले न केवल कारहरू बनाउँछ, तर व्यवसायिक सवारीहरू पनि हल्का बनाउँदछ। उत्तरार्ध TagAZ "हार्डी" हो। मालिकको समीक्षा, विशिष्टता र अन्य उपयोगी जानकारी हाम्रो आजको लेखमा समीक्षा गरिनेछ।
कस्तो प्रकारको कार हो? TagAZ "हार्डी" 2012 बाट ट्यागानोगो ओटोमोबाइल संयन्त्रको क्षमतामा उत्पादन गरिएको एक कम्पैक्ट ट्रक हो। मेशिन यसको कक्षामा सबैभन्दा किफायती हुन डिजाइन गरिएको छ। ट्यागराज "हार्डी" सँग यसको मूल्य दायरामा कुनै प्रतिस्पर्धा छैन। यो सानो सानो शहरी ट्राफिक को लागी डिस्प्ले डिजाइन गरिएको छ, कम्पैक्ट आयोम र गतिशीलता द्वारा विशेषता हो।
TagAZ "हार्डी" कार धेरै संस्करणहरूमा उत्पादन गरिएको छ:
झुकाव र आइसोथीलम भ्यान।
ट्यागराज "हार्डी" केबिनको एक सरल डिजाइन छ। बाह्य, डिज़ाइन909(विशेष गरी, टोयोटा नोच) को जापानी मिनीबुशसहरूसँग समान छ। ट्रक मा टैक्सी धेरै संकीर्ण छ। बम्पर, कन्फिगरेसनको बावजूद, शरीरको रंगमा चित्रित छैन। तथापि, यसको गोल कोहरे रोशनी छ। हेड इप्टिक्स धेरै उच्च छन्। रेडिएटर ग्रिल पनि ब्ल्याक हो र प्रकाशिकीको हुडमा सीमाको सीमाभन्दा बढी छुट्याउँछ।
ट्यागज "हार्डी" कारले मोटोको सानो दोहोर्याएर कम्प्याक्ट्री बिगको तुलना गरेको छ। ढोका ह्यान्डल र दर्पण पनि अनपेक्षित छन्। पहिए - स्टाम्डेड, 14 इन्च। खण्ड एकल "स्केट्स" को पछि, जो एक पल्ट फेरि एक हल्का वर्ग संग कार को बोलता छ। कारमा 17.5 सेन्टीमिटरको उच्च जमीन निकासी छ। पछिबाट, एक तुरुन्त चिनियाँ "फव" 1031 लाई सम्झन्छ, जसमा एउटै संकीर्ण चेस र एक व्यापक बूथ छ। यो आश्चर्यजनक छैन, किनकी आधा नोड्सले चीनबाट ट्रकबाट उधारेको थियो। उदाहरणका लागि, तपाईं ट्यागेज "मास्टर" लिन सक्नुहुन्छ - एउटै "डोंग-फेंग", केवल रूसी संस्करणमा।
ट्यागएज भित्र "हार्डी" - एक ठेठ "चिनियाँ"। यहां सम्म कि काठ को सजावट पनि त्यहि तरिका मा "Fotonas", "Bavakh" र अन्य एशियाई ट्रक मा बनाइन्छ। प्यानल डिजाइन सरल र उत्तेजित छ। कम से कम, ट्यागराज "हार्डी" मालिकहरूको समीक्षाहरूको विशेषता छ। केन्द्रीय कन्सोलमा दुई साना डिटेक्टरहरू, एक जोडा बटन, एक रेडियो टेप रिकार्डर र स्टोवको लागि एक नियन्त्रण इकाई छ। यात्रीको खुट्टामा एक कम्पैक्ट दस्ताने डिब्बा हो। ह्यान्डब्याकहरू तीन-बोलेका छन्, कठोर प्लास्टिक बनाइएका छन्। स्तम्भमा दुई "पन्टि-स्विच" छन्। स्टीयरिंग व्हील एयरब्याग संग सुसज्जित छैन। वहाँ एक pretensioner संग एक बेल्ट छ। चालकको र यात्रीको सीट बीच गियरशफ्ट र हैंडब्रे लीभरका लागि पर्याप्त स्थान छैन (यो सामान्यतया एक यहाँ, केबल ड्राइवमा)। साधन प्यानल - सेतो स्केलहरू। ट्याकमोमिटर छुटेको छ, जुन ट्रकको लागि अजीब छ। दरवाजा कार्डहरु कार्मोमोरमा पनी राखिएको छ। कुनै बिजुली विन्डोहरू छैनन् - सञ्झ्याल सामान्य "ओर्स" सँग खुल्छ।
मालिकों को समीक्षाहरु को भित्र स्पेस को एक विनाशकारी कमी छ भन्न को लागी। त्यहाँ त्यहाँ कुनै उपयुक्त दस्ताने बक्स छैन, जहाँ A-4 ढाँचामा कागजात (जस्तै "GAZel मा") फिट हुन सक्छ। र वास्तवमा गतिविधिको यस क्षेत्रमा यसको साथसाथै कागजातहरू र चलानीहरू लिन आवश्यक छ। सीटहरू समायोजन गर्न पनि समस्याहरू छन्।
सवारी साधन विशिष्टता
जस्तै GAZel ("व्यापार" को उपस्थिति भन्दा पहिले), हुड अन्तर्गत केवल एक पेट्रोल इकाई हो। यसको कामको भोल्युम 1.3 लीटर छ, क्षमता - 78 घोडा।4हजार मुटुमा टोक़ 102 एनएम छ। यस इन्जिनको साथ युग्मित5चरणहरूको लागि म्यानुअल गियरबक्स हो। यो ट्यागमा एकमात्र इन्जिन हो, ट्यागज "हार्डी" को लागि उपलब्ध छ। यसको प्राविधिक विशेषताहरू प्रायः कमजोर छन्। यसैले, पासपोर्ट डेटामा, अधिकतम लोड क्षमता999किलोग्राम संस्करण जहाजमा छ। सानो कामको भोल्युम भोल्युमको दृश्यमा इञ्जिन अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ। शहरी चक्रमा, वाणिज्यिक TagAZ "हार्डी" ले9लीटर ईन्धन सम्म खरिद गर्दछ। मोटर "यूरो -4" पारिस्थितिकी मानकसँग मेल खान्छ। एकै समयमा, यो पूर्णतया "9 औं पेट्रोल" पाईन्छ। मशीन गतिशील छैन, तथापि, प्रति घन्टा 100-110 किलोमिटरको गतिमा यात्रा गर्न सक्दछ। तर यस कारको लागि सबैभन्दा बढी आरामको गति 80 किलोमिटरको गति हो। साथै यो बुझ्नको लागि सार्थक छ कि यो विशाल क्लाइन्टको कारण गुरुत्वाकर्षणको उच्च केन्द्र हो। कार घुमाईएको छ, खासकर जब पूर्णतया लोड हुन्छ।
ट्यागज्याज र यातायात
यसको कम्पैक्ट आयामहरूको कारण, हार्डी इन्टरसिट ट्राफिकको लागि प्रतिस्पर्धी कार भएको छ। कारको लम्बाइ 4.4 मीटर, चौडाई - 1.7 मिटर, उचाई हो - दुई भन्दा बढी (शरीरमा निर्भर गर्दछ)। हाई ग्राउन्ड क्लियरान्सिसले तपाइँलाई उज्ज्वल क्लिम्ब्स र उच्च कर्नेल सहित कुनै पनि बिन्दुमा पुग्न अनुमति दिन्छ। कार ड्राइभ गर्न सक्षम छ जहाँ त्यहाँ पनि तीन-मीटर "गजेल" भएन। यस मा, धेरै मालिकहरू आफ्नो समीक्षामा ध्यान दिनुहोस्, व्यापारिक कारको मुख्य लाभ "हार्डी" हो।
धेरै मालिकहरू कमजोर प्राविधिक विशेषताहरूको बारेमा उजुरी गर्दैनन्। ट्यागराज "हार्डी" गरीब निर्माण गुणस्तरको विशेषता हो। त्यसोभए, एक वर्षपछि अपरेसनपछि ईंन्धन टैंकको प्यान्ट पछाडि छ (यो स्वतन्त्रतापूर्वक विरोधी प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ), स्टीयरिंगको साथ समस्याहरू छन्। साधन प्यानल जानकारीकारी होइन, कहिलेकाहीं स्पीड्रोमीटर र ओडोडेटर "बग"। र पछि, यो आवश्यक किलोमीटर को अनुसार कडा रूपमा पार गर्न आवश्यक छ। एक समान समस्या पहिलो "निक्स्टाह" मा थियो, जहाँ ओडिडोटर 60 हजार को क्षेत्रमा रिसेट भयो। कार रूसले निर्माण गरेको तथ्यको बावजूद, मालिकहरूले स्पेयर पार्ट्सको कमीबारे शिकायत गर्छन्। कार 2014 बाट उत्पादनबाट हटाइयो, त्यसैले GAZel को विपरीत केही नयाँ नयाँ, धेरै गाह्रो हुनेछ। अन्य समस्याहरू - ट्यागज "हार्डी" मा एक कमजोर बिजुली। इग्निशन कुन्नी खराबपन, गुजर बीम हराउँछ।
लागत र पूर्ण सेट
चूंकि मेशिन पहिले नै बन्द गरिएको छ, यो मात्र द्वितीयक बजारमा पाउन सकिन्छ। 2014 को सबैभन्दा "ताजा" भ्यान को लागत 360-380 हजार रबल्स हो।
आधारभूत कन्फिगरेसनमा, ट्यागज "हार्डी" कारलाई विद्युतीय शक्ति स्टीयरिंग (यहाँ रैक र पिनियन नियन्त्रण), एबीएस प्रणाली, पीछे र अगाडि कोहरे लैंप नियन्त्रण गरिन्छ। पूरा सेटमा फरक फरक प्रकारको शरीरमा निर्भर गर्दछ। "हार्डी" चार प्रकारका निकायहरूसँग लैजान सकिन्छ (हामी लेखको सुरुमा सूचीबद्ध छ), चेसिस सहित।
अब मुख्य प्रश्न बनी रहन्छ - के यो व्यावसायिक गतिविधिहरुको लागी ट्याग मालजीज "हार्डी" खरीद गर्न सल्लाहकार छ? धेरै वाहकहरूले यस प्रश्नको जवाफ दिन्छन्। पहिलो कारण TagAZ "हार्डी" अनुपयुक्त छ, स्पेयर पार्ट्सको कमी हो। कार3वर्ष पहिले उत्पादनबाट हटाइयो, र मोडेलको न्यूनपनको कारण विनाशमा केहि छैन। साथै मर्मतमा मर्मत धेरै समस्याग्रस्त छ। धेरै सेवाहरू यस्तो कारको मरम्मत गर्नका लागि इन्कार गर्न (फेरि, बिरामीको कारण)। आरामको सन्दर्भमा TagAZ "हार्डी" धेरै वांछित छोड्छ।
त्यसोभए, हामीले TagAZ "हार्डी" समीक्षाहरू, निर्दिष्टीकरणहरू, डिजाइन र मूल्य के फेला पारेको छ। कारहरू प्रतियोगिहरु बीच "डूब गरिएको"। सानो आयाम GAZel भन्दा राम्रो हुन पर्याप्त छैन। फेरि, "चिनियाँ" को बारेमा बिर्सनु हुँदैन। रुसी संघको पूर्वी भाग र जापानी कार चलाउछ। यस कक्षामा, सर्वश्रेष्ठ विकल्प होन्डई पोर्टर हो। मेशिनसँग राम्रो निर्माण गुणस्तर छ र विश्वसनीयताको पर्याप्त मार्जिन छ। यी परिस्थितिमा, ट्यागजीले हार्डीलाई ठूलो उत्पादनबाट हटाउन निर्णय गरे।
Peugeot साझेदार कारहरूको नयाँ पीढी: टेक्नोलिक विशिष्टताहरू र न केवल
All-Metal Wagons "Volkswagen" र "Iveco"
कार टोयोटा अल्फर्ड 2013 का अवलोकन
कार-भ्यान: अवलोकन, वर्णन, विशेषताहरू, मालिकहरू को प्रकार र समीक्षाहरू
रोमान्टिक परिदृश्य - "यो वर्षा पछि" चित्र Kuindzhi
को टीआरसी St.Petersburg मा "दक्षिण ध्रुव" को एक सिंहावलोकन: किनमेल, मनोरञ्जन, क्याफेहरू
रक्सी 'Sheridans' - आयरल्याण्ड देखि मिठाई पेय
दिल्लीमा होटल - गरिबी वा लक्जरी?
मेरो बाल्यकाल र अग्रगामी टाई
पूर्व रूसी रक्षक Alexei Bugaev
नलकार लागि सिसिले latvia पुस्तिका: सामान्य आवश्यकताहरू
कसरी multivarka मा आलु खाना पकाउनु? शुरुआती लागि नुस्खा
को माइक्रोवेव मा स्क्वास। लागि नुस्खा
ओलम्पिक ज्वाला को इतिहास। ओलम्पिक ज्वाला। टर्च टर्च रिले